First Task Is to Ask Somali by JCPS DEP - Issuu
Howsha ogu horraysa waa waydii â&#x20AC;©
Miyaan ogahay sida ilmahayga laga filayo inuu ku dhaqmo iskuulka / baska goobtiisa?
Maxaad samaynaysaa si aad ilmahayga wax uga barto waxyaabaha aad ka rajeyneyso ee ku saabsan dabeecadda?
Miyaan la socdaa arrimaha la xiriira dabeecadda ee aan u baahanahay in aan wax uga qabto cunugeyga?
Sideed iiga caawin kartaan sidii ilmahaygu uga ilaalin lahaa inuu dagaallamo? (La wadaag wixii dhibaato ah dabeecadda dugsiga).
Miyaan akhriyey Buug-gacmeedka Faragelinta Ardayda iyo Dhaqanka ee Dugsiyada Dadwaynaha Degmada Jefferson?
Ilmahaygu runti ma yaqaan waxa loo baahan yahay si isaga ama iyada looga fogaado tallaabo edbin ah?
Miyaan ogahay xadgudubyada dhaqanka iyo cawaaqibka la midka ah? (Fiiri Buugga Gargaarka iyo Dhaqanka Ardayga)
Maxaa la qabtay si loo hubiyo in ardayda oo dhami inay anshax wanaagsan iyo nabad qabaan? Waa maxay macnaha edbinta horumarsan?
Guriga markaan joogo, ma leeyahay rajooyin cad iyo cawaaqib xumo? Miyaan Ilmahaygu ula Xisaabtamayaa xulashooyinkiisa / keeda?
Waa maxay siyaasadaha edbinta ee aniga, waalid ahaan, aan ugu baahanahay inaan ka warqabo oo aan dhaqan geliyo guriga? Waa maxay wax ka qabadka dhaqanka wanaagsan iyo taakuleynta (PBIS)?
Sidee ayaan u qorsheynayaa inaan la xiriiro dugsiga marka ay jiraan dhibaatooyin suurogal ah oo aan ka warqabo? Ma haystaa lambarrada taleefannada iyo cinwaannada emaylka ee maamulka dugsiga?
Waa maxay sida ugu fiican ee aan ula xiriiri karo dugsiga wixii ku saabsan wax kasta oo aan u baahanahay in aan kula wadaago?
Maxaan sameeyaa si aan u hubiyo in ilmahaygu garto in rabshadaha aan la aqbali karin?
Sideed u isticmaashaa ganaaxyada?
Sideen ugu taageeri karaa siyaasadaha iyo nidaamyada dugsiga ee guriga?
Haddii ilmahayga dugsiga laga joojiyo, ma jiraan nidaam rafcaan qaadasho ah
Ma jiraa liis taleefan / emayl ah oo la heli karo?
Ma tahay goobtii ugu dambeysay?
XIRIIR Dr. Katy DeFerrari Kaaliyaha Agaasimaha Guud ee Cimilada iyo Dhaqanka Xarunta waxbarashada ee Vanhoose 485-6266 katy.deferrari@jefferson.kyschools.us Somali
Howsha ogu horraysa waa waydii KAHORTAGGA XOOG-SHEEGASHADA Iswaydii
Dhibaatadan miyey tahay isku dhaca ama isku faca isku kooxda ah?
Sideen ku ogaanayaa farqiga?
Sideen uga caawin karaa ilmahayga kalsooni uu ku qabo hadalka?
Maxaad aniga iiga baahan tahay?
Sideen uga caawin karaa ilmahayga inuu ku daro dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah in wax laga qabto xaaladda?
Kumaa ku xoog batay? Maxay dhaheen ama qabteen? Halkee ayay tani ka dhacday? Markhaatiyaal ma ahaayeen? Muddo intee le'eg ayay tani soconaysaa?
Yaan u baahanahay inaan u soo sheegto tan dugsiga?
Kumaad tan kala hadashay tan dugsiga? Ma buuxisay foomka warbixinta?
Maxaan sameeyaa si aan uga caawiyo cunugeyga inuu dareemo isku kalsooni si isaga ama iyadu ugu guuleysto dugsiga?
Maxaan kaloo samayn karaa si aan kaaga caawiyo tan?
Sideen ku hubin karaa in ilmahaygu helo fikrad ku saabsan qorshaha ficilka?
Sideen kuugu dari karnaa qorshaha waxqabadka si loo hubiyo in baahidaada la daboolay?
XIRIIR Crystal Carter Horjoogaha Waaxda Kahortagga Xoogsheegashada Dhaqanka iskuulka iyo Cimilada 485-7551 crystal.carter@jefferson.kyschools.us Macallimiinta Kheyraadka Ka-hortagga Xoogsheegashada Steve Gittings 485-6162 Brittany Knipp 485-6162
Howsha ogu horraysa waa waydii
Ilmahaygu ma u qalmaa kuleejka?
Waa maxay casharrada aasaasiga ah ee loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha u-qalmitaanka NCAA?
Ilmahaygu ma inuu qaataa SAT / ACT si uu u galo kulliyadda?
Dugsigu ma bixiyaa imtixaan bilaash ah oo loo yaqaan SAT / ACT?
Ilmahaygu ma u diyaar garoobay SAT / ACT?
Ma bixisaa koorsooyin diyaarsanaan ah SAT / ACT?
Immisa fursadood ayuu ilmahaygu ku qaadanayaa SAT / ACT?
Goorma ayuu dugsigu bixiyaa imtixaanka SAT / ACT bilaash ah?
Sidee ilmahaygu wax ugu baran karaa SAT / ACT? Ma jiraan imtixaanno tababar ama koorsooyin ah?
Sidee qodobka GPA u keenaa dhibcaha SAT / ACT ee u qalmitaanka?
Waa maxay Aqalka Baaritaanka?
Sidee ardaydayga ciyaaraha fudud u diiwaangeliyaa oo kharash baa jira? Waa maxay Foomka 48H? Sidee loo codsadaa waraaqaha gudbinta? Waa maxay waqtiga hawlgalku?
XIRIIR Jerry Wyman Hawlaha Maamulaha Fulinta iyo Ciyaaraha fudud 485-3331 Jerry.wyman@jefferson.kyschools.us
Ku socoto Waalidiinta Xulashada Barnaamijyada Xagaaga Iswaydii
Waydii Bixiyaha Xilliyada-ka-baxsankuwa-dugsiga (OST)
Sidee ayuu ugu guuleystaa barnaamijka ubadkeygu xiiseynayo?
Sidee barnaamijku u qiimeeyaa ama ula socdaa horumarka cunug kasta?
Shaqaalaha barnaamijka ma yihiin kuwo khibrad leh oo si wanaagsan u tababaran?
Waa maxay waayo-aragnimada caadiga ah ee shaqaalaha la shaqeyn doona cunugeyga? Tababar noocee ah ayay shaqaaluhu helayaan?
Waa maxay noocyada nashaadaadka xagaaga ee aan xiiseeyo ubadkayga?
Ilmahaygu ma heli doonaa jimicsi jireed, fursado kobcin xagga dhaqanka ah, iyo ku celcelin ah xagga akhriska, xisaabta, iyo xirfadaha kale? Ilmahaygu ma heli doonaa fursad uu ku doorto wax qabadkiisa?
Sidee bay carruurtu badanaa u qaataan maalintooda barnaamijka?
Sidee ayaa loo habeeyaa maalin / usbuuc caadiya? Sidee ilmahaygu ku qaadan doonaa waqFgiisa?
Goorma ayaa barnaamijkan la bixiyaa?
Waa maxay saacadaha barnaamijka iyo taariikhaha?
Barnaamijkan ma awoodi karaa?
Barnaamijku ma bixiyaa deeq-waxbarasho ama gargaar dhaqaale? Hadday haa tahay, sidee qoIu uqalmaa?
Cunto iyo cunno fudud ma la bixin doonaa?
Barnaamijku ma bixiyaa cunto caaﬁmaad leh iyo cunto fudud?
Sidee bay shaqaaluhu ula falgalaan ilmahayga?
Sidee ayuu barnaamijku u horumariyaa isdhexgalka wanaagsan ee ka dhexeeya dhalinyarada iyo shaqaalaha?
Maxaa dhacaya haddii ilmahaygu leeyahay waxbarasho gaar ah ama baahiyo jidheed?
Sidee barnaamijku u habeeya carruurta leh baahiyo waxbarasho oo gaar ah, baahi jireed ama xasaasiyad?
Waa noocee jawiga barnaamij ee ilmaheyga u baahan yahay?
Sidee bay shaqaalaha barnaamijka u hubiyaan jawi nabdoon oo caaﬁmaad qaba?
Sideen uga qaybqaadan doonaa nashaadaadka ilmahayga?
Fursadahee, haddii ay jiraan, ayaa heli kara waalidiinta si ay uga qaybqaataan?
Ilmahaygu ma ka qaybqaadan doonaa fursadaha safarka dibedda? Hadday haa tahay, kharash ma jiraa?
Barnaamijku ma bixiyaa safarro socdaal ah kharash dheeraad ah? Hadday haa tahay, waa maxay qiimuhu?
Ma jiraa nidaam codsi iyo waqFga kama dambaysta ah ee lagu codsado barnaamijka?
Goorma iyo sidee ayaan u codsanayaa ilmahaygu inuu dhigto barnaamijka?
XIRIIR Sylena R. Fishback Maamulaha, Degenaanshaha Macallinka Louisville Kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo barnaamijyada saboolnimada 3332 Newburg Road 485-7967 sylena.fishback@jefferson.kyschools.us
Howsha ogu horraysa waa waydii Manhaj â&#x20AC;© Iswaydii
Miyaan ogahay waxa la i barayo sannad dugsiyeedkan?
Maxaad samaynaysaa si aad u hubiso inaan barto waxa loo baahan yahay inaan barto?
Miyaan ka war qabaa xooggayga iyo daciifnimadayda?
Sidee iyo goormaad ila soo xiriiri doontaa markaan ku saabsan xooggayga iyo daciifnimadeyda?
Miyaan garanayaa siyaasada shaqada guriga?
Muxuu yahay siyaasaddeena shaqada guriga?
Marka guriga la joogo, miyaa leeyahay rajooyin cad, cawaaqib xumo, iyo mas'uuliyado iga da'da ku habboon aniga?
Waa maxay shuruucdeena fasalka, filitaanka, iyo abaalmarinta? Waa maxay sharciyada dugsiga, rajooyinka, iyo abaalmarinnada?
Sidee ula xiriiraa macallimiintayda?
Waa maxay habka la aqbali karo ee aan kugu ogeysiin karo haddii aan u baahdo in lagaa caawiyo shaqada dugsiga, dhibaatooyinka dugsiga, ama arrimaha guriga?
Waa maxay kobcinta iyo fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee aan heli karaa?
Anigu ma waxaan ku socdaa wadada saxda ah ee kulliyadda iyo / ama u diyaargarowga shaqo?
Sideen ku ogaanayaa inaan ku socdo wadada saxda ah ee kuleejka iyo / ama u diyaarsanaanta shaqada?
DABEECAD Ma leeyahay cod marka dhibaatooyinka dabeecadda ay soo baxaan?
Miyaan u sheegi doonaa dhinacayga sheekada?
Maxaan sameeyaa markay tahay xoogsheegashada?
Maxaan sameyn karaa si aan uga caawiyo iskuulkeena inuu noqdo mid aan caga jugleyn ku jirin?
GUUL Miyaan ka shaqeeyaa heer ka sareeya heerka fasalka?
Miyaa laygu baadhay barnaamijka barkadaha sare ee Talent Pool ama barnaamijka hormarinta?
Waxaan soo buuxiyay shuruudaha Barnaamijka Bilowga Talent Pool ama Barnaamijka hormarinta. Micnaheedu maxay tahay?
Waxaan soo buuxiyay shuruudaha Barnaamijka Bilowga Talent Pool ama Barnaamijka hormarinta. Micnaheedu maxay tahay? Waa maxay xulashooyinkayga?
XIRIIR Dr. Carmen Coleman Madaxa Tacliinta Sare 485-3476 carmen.coleman@jefferson.kyschools.us Somali
Howsha ogu horraysa waa waydii Daganaanta â&#x20AC;Š Shucuurta Iswaydii
Ilmahaygu ma ii sheegayaa waxa ay ku fikiraan ama dareemaan? Sidee niyadda ubadkaygu inta uu dugsiga joogo?
Sidee niyadda ubadkaygu inta uu dugsiga joogo?
Ilmahaygu ma la dhacay khasaare weyn, sida dhimasho ama kala tag?
Ilmahaygu ma la hadlayaa dadka waaweyn ee iskuulka lagu aamini karo? Waa kuma qofka weyn?
Ilmahaygu miyuu ku soo gaadhay dhaawac, sida furiin, xumayn, daroogo maandooriye, goobjoog ka ahaa rabshad guri, hoy la'aan, dhaqaaq joogto ah, rabshad bulshada?
Sidee shaqaalaha loogu wacyi galiyaa xannaano u sheegida dhaawacyada?
Maxaa taageero ah oo laga heli karaa dugsiga iyo bulshada si ay uga caawiyaan taageerista fayoobaanta shucuurta?
Sidee xubnaha shaqaaluhu ula xiriiraan ardeyda wax ka qabatey dhaawacyada?
Sideen ku heli karaa taageerada dugsiga iyo bulshada?
Waa maxay habka loo garto ardayda u baahan taageerada caafimaadka dhimirka?
Ma jiraan isbeddelo qaab nololeed oo gacan ka geysan kara taageeridda wanaagga niyadeed, sida hurdada, jimicsiga, nafaqada?
Maxaa la sameeyaa si loogu wargaliyo loona dhiirigeliyo isbeddelada hab-nololeedka wanaagsan, sida nafaqada, jimicsiga, iyo hurdada?
Ilmahaygu ma ku mashquulaa nashaadaadyo madadaalo inta lagu jiro ama kadib dugsiga? Ilmahaygu ma leeyahay cilaaqaad wanaagsan oo ay waqti la qaataan?
Ilmahaygu ma ku leeyahay xiriir wanaagsan asxaabta dugsiga?
Waa maxay danaha canuggayga, kartidiisa, iyo xoogaga?
Ma taqaanaa xiisaha ilmahayga, hibooyinkiisa, iyo awoodooda?
Ilmahaygu hadda baahiyahiisa aasaasiga ah ma la daboolaa (cuntada, dharka, hoyga, caafimaadka)?
Maxaa sahay ah oo laga heli karaa dugsiga ama bulshada dhexdeeda si ay uga caawiso bixinta ilmahayga baahiyaha aasaasiga ah?
XIRIIR Brook-ga: 502-896-0495 Nabadda U ee L: 502-451-3333 Khadka dhibaatada ee Centerstone: 502-589-8070
Haddii aad ka walwalsan tahay welwelka ku saabsan caafimaadka maskaxda ee ubadkaaga oo aad u malaynayso inay khatar ku yihiin naftooda ama kuwa kale, fadlan la xiriir dugsiga ilmahaaga ama mid ka mid ah wakaaladaha soo socda: Somali
Daganaanta Shucuurta (Ku socota Shaqaalaha) Waydii Macallinkaaga
Ma jiraan wax aad ka xuntahay?
Ma awoodaa inaan go’aamiyo goorta uu ilmahaygu murugaysan yahay ama xanaaqsan yahay?
Markaad xanaaqdo, maxaa kaa caawinaya inaad isdejiso?
Sideen ugu jawaabaa ardayda markay xanaaqsan yihiin? Waa maxay xirfadaha la-qabsashada ee aan barayo / ku dayasho?
Waa kuwee qaangaarka / guriga kula hadli kara?
Xiriir wanaagsan ma la leeyahay waalidiinta ama mas'uuliyiinta?
Waa kuma qofka aad ku kalsoon tahay dugsiga?
Sidee ardaygu ula xiriiraan dadka waaweyn? Waa kuwee dadka waaweyn?
Waa kuma saaxiibkaa kuugu kalsoon?
Ardaygu ma leeyahay cilaaqaad wanaagsan oo saaxiibbo ah?
Waa maxay kartidaada iyo xiisahaaga?
Fursado ayaa ka jira dugsiga ardayga inuu soo bandhigo
Sidee jirkaagu u dareemayaa markaad xanaaqsan tahay?
Ma dhammaystiraa baarayaasha caalamiga ah oo ma bixiyaa tilmaamaha barashada-shucuurta bulsheed?
Ma taqaanaa cidda aad lahadleyso marka aad dareen ka qabtid naftaada ama dadka kale?
Maxaa sahay ah oo laga heli karaa dugsiga ama bulshada dhexdeeda ardayda si ay u helaan adeegyada la-talinta?
Hadaad aaminsantahay ardaygu inuu qatar ku yahay naftiisa ama dadka kale, fadlan si dhakhso ah u arag iskuulka caafimaadka maskaxda ama lataliyaha iskuulka
Howsha ogu horraysa waa waydii â&#x20AC;Š Hawlgal
Ma ogahay waxa ilmaheyga ay tahay in la baro sanad dugsiyeedkan?
Maxaad sameyneysaa si aad u hubiso in cunugeygu baranayo waxa isaga ama iyada laga doonayo inay bartaan?
Ma la socdaa awooda canuggayga awoodooda iyo daciifnimadiisa?
Sidee iyo goormaad ila xiriiri doontaa si aad iiga ogeysii waxa canugayga ku dhacaya?
Ilmahaygu ma yaqaanaa waxa loo baahan yahay si isaga ama iyadu ay u helaan darajooyinka ugu sarreeya qayb kasta oo shaqo ah?
Miyaan ogahay wax barnaamijyo ama ilo ah oo dugsiga ka faa'iideysan kara cunugeyga? Waa maxay habka loo qoro barnaamijyadaan?
Maxaa la qabtay si loo hubiyo in dhammaan ardayda lagu daro fasallo adag iyo casharro?
Marka guriga la joogo, ma haystaa rajooyin cad, cawaaqib, iyo mas'uuliyado ku habboon da'deyda?
Waa maxay siyaasadaha edbinta ee aniga, waalid ahaan, aan ugu baahanahay inaan ka warqabo oo aan dhaqan geliyo guriga?
Sidee ayaan u qorsheynayaa inaan la xiriiro macallimiinta?
Fursado noocee ah ayaan heli karaa oo ku tabaruci karaa iskuulada ilmahayga?
Waa maxay kobcinta iyo fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee bulshada ee aan ubadinayo ilmaheyga?
Sideen ugu caawin karaa macalinka guriga?
Haddii cunuggaygu gadaal ka dhacayo, waa maxay fursadaha dardargelinta aad siineyso si isaga ama iyada fasalka looga dhigo?
XIRIIR Dr. Vanessa M. McPhail Khabiir, Arimaha Bulshada Kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo barnaamijyada saboolnimada Dhismaha LAM 4309 Bishop Lane, Office 221 485-3631
DARYEELKA KORINTA Iswaydiiâ&#x20AC;©
Ma danta ugu wanaagsan ee cunuggaygu kujirtaa waa inuu ku sii jiraa iskuulkiisa / keeda? Miyaan kala hadlay arintaan shaqaalaha bulshada?
Sideed iga caawin kartaan inaan ilmahayga ku sii hayo iskuulkiisa / dhigta hadda? Gaadiid ma la heli karaa?
Go'aan wanaagsan ayaa laga gaadhay ardayga inuu bedelo dugsiyada?
Sideed iga caawin kartaa sida ugu dhakhsaha badan diiwaangelinta ilmahayga ee iskuulkiisa / keeda cusub?
Hadday tahay inuu ilmahaygu beddelo dugsiyada, ma loo keenay baasaboorka waxbarashadda dugsiga inuu dhammaystiro?
Miyaad dhammeystirtay baasaboorka waxbarashada oo aad siisay shaqaalaha bulshada?
Ilmahaygu waxbarashadiisa miyuu bartilmaameedsanayaa? Ilmahaygu ma leeyahay IEP ama 504 qorshe?
Miyaynu diyaarin karnaa kulan aan kaga wada hadalno baahida waxbarasho ee cunuggayga iyo adeegyada la heli karo? Sidee ayaa loo fulinayaa qorshaha IEP ama 504?
Sidee ayaan u qorsheynayaa inaan la xiriiro dugsiga marka ay jiraan dhibaatooyin aan ka warqabo?
Miyaan ogahay wax barnaamijyo ah ama kheyraadka dugsiga ah oo anfacaya ilmahayga?
Barnaamij noocee ah ayaa heli kara oo ka caawinaya cunugeyga baahi bulsho iyo mid shucuureed iyo waliba baahi waxbarasho?
Ilmahaygu ma xiiseynayaa wax uun ka dib hawlaha dugsiga / howlaha manhajka ka baxsan?
Waa maxay nashaadaadka manhajka ka baxsan ee ubadka hesha ilmahaygu?
Ilmahaygu dhib ma ku qabtaa la qabsiga meelaynta cusub ama ka kaxaynta qoyska bayoolojiga?
Iskuulku ma bixiyaa adeegyo la talin ah ama ma jiraa qof ilmahaygu la hadli karo haddii isagu / iyadu ay la kulmaan dhibaatooyin xagga shucuurta ah?
Ilmahaygu ma doonayaa inuu galo kulliyadda? Ilmahaygu ma la kulmay iskuduwaha nololeed madaxbanaan ama la-taliye si uu ugala hadlo xulashooyinka kulleejyada iyo dhammaystiro waraaqaha ku habboon?
Adeegyo noocee ah ayaad bixinaysaa si ardayda looga caawiyo ka diiwaangelinta waxbarashada dugsiga sare ka dambeeya?
Ilmahaygu horumar ma ka sameeyaa xagga sare u qaadida? Miyaan hubiyaa xariirka waalidka si aan ula socdo horumarka?
Sideen ku heli karaa xariirka waalidka?
Sidee imaanshaha cunuggayga? Ma u gudbiyay waraaqaha waraaqaha maqnaanshaha cudurdaarka leh ee la xidhiidha taariikhaha maxkamada, shirarka daryeelka caruurta, iwm.?
Waa maxay waraaqaha loo baahan yahay si loo hubiyo in maqnaanshaha la xiriira daryeelka caruurta cudurdaar la leeyahay?
Ilmahaygu ma qaataa wax dawooyin ah ama ma leeyahay baahi caafimaad oo gaar ah oo dugsigu u baahan yahay inuu ka warqabo?
Yaan kala hadlaa waxyaabaha ku saabsan caafimaadkayga / baahida caafimaad ee gaarka ah ee ilmahayga?
XIRIIR Lindsay Bale Xiriiriyaha Daryeelaha Xafiiska Satalaytka ee Shawnee 4018 W. Market St. West Wing | 485-6358
ADEEGYADA HIBADA Iswaydii
Ilmahaygu ma shaqeynayaa wixii ka sareeya heerka fasalka?
Ilmahaygu ma laga baaray barnaamijka 'The Talent Pool' ama barnaamijka hibada ee iskuulkiisa hadda?
Ilmahaygu wuu buuxiyey shuruuda oo wuxuu ku jiraa Bilowga Talent Pool ama Adeegyada Hibada. Micnaheedu maxay tahay?
Maxaa la qabtay si loo kala saaro waxqabadka si loo haqabtiro baahiyaha shaqsiyeed ee cunuggayga? Ilmahaygu ma ku lug leeyahay fursadaha kobcinta ee dugsiga, sida Xallinta Dhibaatada Mustaqbalka, Xusuusta Degdegga ah, Naadiga 'Beta Club', iyo Ururka Maamuusta Qaranka? Waa maxay nidaamka lagu galo barnaamijyadaan?
Miyaan garanayaa farqiga u dhexeeya barnaamijka dhammaystirka ah iyo Barnaamijyada Hibbada?
Sidee bay khibradda ilmahaygu dugsiga ku kala duwan tahay sababta oo ah ku lug lahaanshaheeda barkadda sare ee Talent Pool ama Programming Programming?
Goorma ayaan ilmahayga ku heli doonaa Qorshaha Adeegga Hibbada?
Marka guriga la joogo, ma haystaa filashooyin cad, cawaaqib xumo, iyo masuuliyado wax ka qabta baahiyaha bulsheed iyo niyadeed ee ilmahayga?
Waa kuwee qaab dhismeedka aan u baahnahay in lagu haqabtiro baahiyaha bulsheed iyo shucuurta ee ilmahayga? Sidee buu isagu ama iyadu uga jawaabtaa asxaabta? Ilmahaygu ma leeyahay saaxiibo isku da 'ah?
Sidee ayaan u qorsheynayaa inaan ula xiriiro macallimiinta ilmahayga? Waa maxay fursadaha kobcinta ee bulshada ka heli kara ilmahayga weyn?
Sideen ugu taageeri karaa ilmahayga kartida heerka-sare ee guriga?
Fursado noocee ah ayaan heli karaa oo ku tabaruci karaa dugsiga ilmahayga? Waa maxay sida ugu wanaagsan ee aan kula xiriiri karo ee ku saabsan horumarka cunugeyga? Maxay yahiin wax qabadyada ka baxsan beeshayda ee laga helo bartayaasha horumarsan? Ma i siin kartaa macluumaadka xiriirka? Anigoo dadaal ugu jira sidii cunugeygu ugu shaqeyn lahaa heerka fasalka ka sarreeya, maxay yihiin nashaadaadka kobcinta ee aan ubadkeyn karo ilmaheyga si aan ugu dhiirigeliyo kartideeda / kartideeda? Sideen ugu taageeri karaa waxbarashada guriga?
â&#x20AC;Š XIRIIR Barnaamijka hormarinta / Xafiiska hibada 485-7424 askadvanceprogram@jefferson.kyschools.us www.jefferson.kyschools.us
"Guul sare had iyo jeer waxay ku dhacdaa qaab dhismeedka filashada sare." -Charles Kettering
Howsha ogu horraysa waa waydii â&#x20AC;Š
KOBACA MASKAXDA Iswaydii
Waan ogahay waxa kobcitaanka maskaxdu yahay?
Ma ku tababartaa kobcinta maskaxda?
Miyaan ogahay haddii xeeladaha fikirka kobcinta lagu isticmaalo dugsiga ilmahayga?
Dhamaan macallimiinta ma loo tababaray dadaallada kobcinta maskaxda, oo ay kujiraan tixraacyo iyo falanqeyn ku saabsan aaminsanaanta dadka waaweyn?
Waa maxay su'aalaha aan weydiin karo cunugeyga ee ku kallifin doona isaga / iyada inay fikiraan?
Ma bixisaa tababar aqoon-korodhsi ah xaga maskaxda?
Miyaan garanayaa siyaabo lagu kobciyo maskaxdamaskaxda?
Sideed u kobcin kartaa fikirka kobcinta ee iskuulkan, iyo sidee aniga waalid ahaan- ugu taageeri karaa guriga?
Ilmahaygu ma ku ammaanayaa shaqadiisa adag ee taageerida maskaxda-koritaanka?
Xeelado noocee ah ayey u isticmaalaan fasalkaaga?
Ilmahaygu wax ma ka bartaa dhaleeceynta?
Xagee ka heli karaa ilo kale xaga fikirka kobaca?
Ilmahaygu ma u arkaa jawaab celinta sidii fursad waxbarasho?
Dhinac noocee ah koritaanka maskaxda ayaan u baahanahay inaan kula shaqeeyo cunugeyga guriga?
Maskax degan: Waxaad rumeysan tahay in xirfadahaaga iyo caqligaagu ay yihiin tayo go'an oo aadan lahayn awood aad ku horumariso badankood. Waxaad ku dhalatay caqli gaar ah wax badana kama qaban kartid inaad bedesho. Koritaanka maskaxda: Waxaad rumeysan tahay in xirfadahaaga iyo caqligaagu yihiin waxyaabo la horumarin karo - in aad leedahay awood aad wax ku barato. Xirfadaha waxaa lagu dhisaa dadaal, qof walbana waa is beddeli karaa. Wax laga beddelay buugga Cardi Dweck ee Mindset: The New Psychology of Success
WAXBARASHO AAN GURI LAHAYN Iswaydii
Waa maxay su'aalaha aan weydiin karo ee ku saabsan adeegyada hoos taga McKinneyVento?
Waa maxay xaquuqda waxbarasho iyo adeegeyaasha la heli karaa ee lagu taageerayo qoysaska u qalma?
Miyaan si buuxda u fahamsanahay sida qoysku ugu qalmo adeegyada McKinneyVento?
Waa kuma degmadu la xidhiidho adeegyada qoysaska soo gudbinta? Sideen ku heli karaa adeegyada?
Sideen ugu taageeri karaa xasilloonida waxbarasho iyo sii wadista canuggayga?
Gaadiid noocee ah ayuu heli karaa cunugeygu inuu ku joogo isla iskuulka (iskuulkii asalka ahaa)?
Anigu ma aqaanaa ilaha laga heli karo degmo Haddii ilmahaygu beddelo dugsiyada, yaa dugsiyeedka loogu talagalay qoysaska ku naga caawin kara inaan si dhakhso leh u nool kala-guurka? wareejinno diiwaannada? Sidee ayuu cunugeygu ugu tegi karaa safarrada safarka fasalka ama uga qeybqaadan karaa nashaadaadka kale ee dugsiga haddii aanan bixin karin?
Sidee ilmahaygu ugu heli karaa cunnooyin lacag la'aan ah dugsiga? Sidee ilmahaygu ku heli karaa sahay bilaash ah haddii loo baahdo?
XIRIIR Giselle Danger-Mercaderes Khabiirka Helitaanka iyo Fursadda Sinaanta Ardayda iyo Ka Qaybgalka Bulshada 485-3560 giselle.danger-mercaderes@jefferson.kyschools.us
GANACSIYADA DADKA LAGA BADAN YAHAY AMA DUMARKA (MWBE) Iswaydii
Weydii Xafiiska MWBE
Ma waxaa la ii sharciyeeyay sidii qof yar ama Ganacsi Haweenka ah?
Shahaadada maaddaama ay tahay Shirkad Yar Yar oo Ganacsi (MBE), Ganacsi Ganacsi Haweenka (WBE), ama Ganacsi Aan Haboonayn (DBE) ayaa ka caawin doona shirkaddeyda sidii ay u heli lahaayeen ganacsi cusub?
Waa maxay faa'iidadeyda tartan?
Ganacsi ahaan beelaha laga tirada badan yahay- ama haweenku leeyihiin ama ganacsi aan kala go 'lahayn, sidee bay shirkadayda ula shaqeysaa JCPS?
Wax soo saar ama adeeg noocee ah ayaan siiyaa kuwaas oo la jaan qaada Iskuulada Dadweynaha ee Jefferson County (JCPS)?
Anigu waxaan ahay MWBE xiiseynaya kaqeybgalka heshiiska dhismaha. Sideen ku ogaan karaa qandaraasyada la bixin doono ama la iibin doono?
Miyaan hayaa qorshe lagu daro MWBE shaqooyinka hoosaadyada?
Maxaa ka mid ah dadaalka iimaanka wanaagsan ee loo adeegsanayo MWBE?
Xiriir Delquan Dorte Isuduwaha Howlgelinta Bulshada Xarunta waxbarashada ee VanHoose, dabaqa 3aad 485-3655 Delquan.dorsey@jefferson.kyschools.us
SHARCIGA SINNAANTA MIDABKA Iswaydii
Miyaan garanayaa Shaciga Sinnaanta Midabka?
Nidaam noocee ah / dhaqameedkee ayuu iskuulku ka qaatay Habraaca Falanqaynta Sinaanta Cunsuriyadda (REAP)?
Miyaan ogahay sababta aan ugu baahan nahay Nidaamka Sinaanta Jinsiga?
Xeelado istaraatiijiyad waxbaris dhaqan ah ayaad u isticmaashaa fasalkaaga?
Miyaan ogahay halka laga helo qorshayaasha Iskuulka Sinaanta Jinsiga?
Dhammaan macallimiinta dhismaha dugsiga ma tababar ayey ka heleen Machadka Sinaanta?
Xageen u kacaa si aan uga helo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan siyaasada Sinaanta Jinsiyadaha?
Tababar noocee ah ayaad heshay si kor loogu qaado waxtarka aad ugu adeegto dad kala jaad ah?
Sideen ugu taageeri karaa Qorshaha Iskuulka Sinaanta Iskuulada ee cunuggayga?
Sideed u kobcineysaa manhajka si uu u noqdo mid loo wada dhan yahay?
Xagee ka heli karaa macluumaadka ku saabsan Siyaasadda Sinaanta Jinsiyadda?
XIRIIR Dwan Williams Khabiirka Sinnaanta Midabka Xarunta waxbarashada ee VanHoose, dabaqa 3aad 3332 Newburg Road 502-485-3620 Dwan.Williams@jefferson.kyschools.us
Dhaqan Celin Iswaydii
Anigu ma aqaanaa siyaasadaha dhaqan celinta ee Dugsiyada Dadwaynaha Degmada Jefferson (JCPS) Buugga Tilmaan-bixiyaha Ardeyda iyo Waxqabadka Dhaqanka?
Waa maxay dhaqamada soo celinta?
Miyaan ogahay haddii dhaqannada soo celinta lagu isticmaalo dugsiga ilmahayga?
Waa maxay dhaqamada soo celinta ee si gaar ah looga isticmaalo dugsiga?
Miyaan la socdaa dhaqamada ay dhaqamada dhaqan celinta u baahan yihiin jawaab ku habboon?
Ficillada dib u soo celinta ma loo isticmaali doonaa in lagu soo celiyo cilaaqaadka xitaa haddii la joojiyo?
Ma bartaa ilmahayga in ay jirto waajib ku ah in la hagaajiyo cilaaqaadka ay waxyeeleeyeen arrimaha anshaxa iyo asluubta?
Dhamaan macallimiinta ma loo tababaray inay si ku habboon ugu isticmaalaan dhaqannada soo celinta fasalka gudahiisa? Sideed uga caawin kartaa ilmahayga sidii uu ku heli lahaa habab wanaagsan oo lagu xaliyo khilaafaadka?
Waxaan aaminsanahay in ku celcelinta Sidee waxtar u leh dhaqamada soo celinta dhaqan celinta ay jawaabcelin ku filan tahay xallinta isku dhaca ku saleysan dugsiga? iskudhacyada iskuulada?
XIRIIR Dr. Katy DeFerrari Kaaliyaha Agaasimaha Guud ee Cimilada iyo Dhaqanka Xarunta waxbarashada ee Vanhoose 485-6266 katy.deferrari@jefferson.kyschools.us
BADBAADADA IYO DEEGAANKA Iswaydii
Calaamado noocee ah ayaan ku arkaa dugsiga canuggayga oo adkeynaya ka dhigista amniga marka hore?
Nidaam nabadgeliyadee buu ilmahaygu iskuulka ku bartaa?
Miyaan ogahay meesha laga helo macluumaadka ku saabsan dambiyada rabshadaha wata ee dugsiga cunugeyga, oo qofna miyaa kala hadlay macluumaadka qof kasta?
Goorma iyo yaan kala hadlaa macluumaadka aan ka helo dembiga iyo rabshadaha dugsiga?
Sidee iskuulku ila xiriirayaa hadii hub khatar ah laga helo iskuulka?
Waa maxay nidaamyada lala xiriirayo haddii hub khatar ah laga helo dugsiga?
Maxuu shaqaalaha iskuulka ii sheegay sida ay Markaan ilmahayga kaxaysto inta lagu jiro u siideyn doonaan ardayda hadii xaalad dhacdo deg-deg ah, waa kuwee degdeg ah ay ka dhacday iskuulka? dokumentiyada aan u baahan ahay in aan keeno? Yaan u sheegaan dhibaataynta cunuggayga?
Yay tahay inuu ilmahaygu ku wargaliyo boocboocsiga dugsiga?
Miyaan ogahay in amaanku ku qulqulayo ilmahayga iskuulka dhexdiisa?
Intee jeer ayaad ku tababbartaa dardargelinta xaaladaha degdegga ah (tusaale ahaan, dabka, duufaanta, dhulgariir, quful)?
Miyaan ka warbixiyay khataraha iskuulka ee aan ku arkay gudaha ama banaanka dugsiga?
Kumaan u sheegaa khatarta aan dugsiga ku arkay?
XIRIIR Stan Mullen Agaasime, Amniga iyo Baaritaannada 485-3121 stan.mullen@jefferson.kyschools.us
Howsha ogu horraysa waa waydii GO'AAN GAARITAANKA-KU-SALEYSAN DUGSIGA (SBDM) GO'AAN LAâ&#x20AC;© SOCODSIIN AH OO GOLAHA-KU-SALEYSAN Iswaydii
Ma heli karaa macluumaadka loo baahan yahay si aan Ma ii soo diri kartaa iimeyl nuqul ka mid ah ajandaha u gaaro go'aanno xog-ogaal ah ka hor kulanka kulanka, daqiiqadaha la oggolaanayo, iyo wixii golaha? dukumiinti ah ee aan ka wada hadli doonno / ansixin doono kulankayaga xiga ka hor kulankaas? Ma haystaa nuqulada hadda jira ee xeerarka iyo shuruucda golaha?
Xeerarka iyo siyaasadaha ma la cusbooneysiiyaa? Haddaysan ahayn sidaas, waa maxay qorshaha lagu cusboonaysiiyo qawaaniinta iyo shuruucda si loo hubiyo inay kor u qaadaan guusha ardayda?
Sideen ula xiriiri karaa macluumaadka golaha kooxda Sidee macluumaadka ku jira siyaasadahaan loogu kooxdeyda? wargaliyaa daneeyayaasha? Miyaan marin u hayaa macluumaadka ugu dambeeyay ee imtixaanka gobolka?
Sidee iyo goorma ayaa loo soo bandhigi doonaa xogta imtixaanka gobolka golaha?
Goluhu ma ka doodayaa / falanqeeyaa xogta la xisaabtanka socda (wixii ka baxsan macluumaadka imtixaanka gobolka) si loogu wargaliyo go'aanadiisa?
Waa maxay xogta la xisaabtanka ee sida joogtada ah loogu soo bandhigi doono golaha?
Miyaan garanayaa sida loo helo Qorshaheena Dib-uhagaajinta Dugsiga ee hadda ah (CSIP)?
Sidee goluhu u kormeeri doonaa hirgelinta CSIP?
Sideen ku heli karaa miisaaniyadeena hadda?
Immisa jeer ayuu goluhu heli doonaa cusboonaysiinta miisaaniyada? Sidee loo kormeeri doonaa lacagahaas si loo hubiyo inay ku leeyihiin saamaynta ugu sarreysa guusha ardayga?
Anigu ma ka war hayaa nidaamka hadda socda ee horumarinta CSIP iyo miisaaniyadda dugsiga?
Ma jiraan wax horumar ah oo loo baahan yahay in lagu sameeyo geeddi-socodka hadda jira si loo hubiyo in goluhu sameeyo go'aannada sida ugu badan wax looga sheego?
XIRIIR Dr. Shawna L. Stenton Xafiiska Go'aan Gaarista Ku Saleysan Dugsiga (SBDM) Xarunta waxbarashada ee Vanhoose 485-3056 shawna.stenton@jefferson.kyschools.us
CIWAANKA I Iswaydii
Ilmahaygu ma dhigtaa dugsiga Cinwaanka I?
Muxuu yahay shuruudaha lagu dhigan karo Iskuul Cinwaan I?
Waan ogahay waxa loola jeedo Cinwaanka I?
Waa maxay faa iidooyinka imaanshaha dugsiga Cinwaanka I?
Miyaan ka soo qeybgashay shirkii 'cinwaanka I' ?
Ma la qabtay kulan sanadle ah oo Cinwaan I ah?
Miyaan akhriyay, oo saxeexay oo aan soo celiyey Foomka Iskuulka ee Iskuulka?
Ma u soo dirtay dugsiga ilmahayga Foomka Iskuulka Dabaq?
Miyaan akhriyay Siyaasadda Cinwaanka I?
Miyaad wadaag ama sharax ka bixinaysaa Nidaamka I koowaad?
Canuggayga ma lagu casuumaa inuu kaqeybgalo fursado kasta oo waxbarasho oo dheeraad ah?
Waa maxay fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee ilmahaygu heli karaa?
Miyaan hubiyay in ilmahaygu ka qaybqaato Waa maxay fursadaha waxbarasho ee dheeraadka fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee lagula ah ee ilmahaygu helo? taliyay? Waan ogahay sida ilmahaygu ku yahay fasaladiisa ama fasaladeeda?
Ma yihiin fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee isbeddelaya horumarka ilmahayga
Miyaan ka soo qeybgalin shirarka waalidiinta, sida shirarka, kulamada macluumaadka, iyo tababbarka waalidiinta?
Maxaan sameyn karaa si aan cunugeyga ugu caawiyo guriga?
XIRIIR Dr. Staci Eddleman Agaasime, Cinwaanka I 485-3240 staci.eddleman@jefferson.kyschools.us
Waqti intee le'eg ayaan siin karaa iskaa wax u qabso?
Noocee ah tabaruceyaal noocee ah ayaa dugsigaagu leeyahay?
Miyaan dhammeeyay Hubinta Diiwaanada Tabaruca ee Dugsiga?
Maxaan filan karaa iskaa wax u qabso ahaan dugsigaaga?
Yaan la xiriirayaa si aan u muujiyo xiisaha aan u qabo tabarucid?
Immisa jir baan ahay inaan iskaa wax u qabso noqdo?
Halkeen jeclaan lahaa tabaruc?
Waqti intee le'eg ayaan u baahan ahay si mutadawacnimo ah?
Waa maxay waxyaabaha aan ka qabanayo tabaruca? Waxaan hayaa diiwaan dambiyeed, wali ma tabaruci karaa? Miyaan ugu fiican ugu adeegi karaa booska tabaruca aniga oo la xiriira xiriir toos ah ama toos ula xiriira ardayda?
Ma u soo qaadan karaa asxaabteyda iyo qoyskeyga si tabaruc ah aniga ila shaqeeya?
Miyaan u gudan karaa masuuliyadda tabarucidda muddada-dheer?
Ma heli doonaa tababar ku saabsan kaalinta aan ku tabaruci doono?
Sidee ugufiican ayaan ugu adeegi karaa Iskuulada Dadweynaha ee Jefferson County (JCPS)?
Ma jiraan wax shuruudo gaar ah oo loogu talagalay tabaruceyaasha?
Miyaan awood u yeelan karaa inaan wax ku biirin karo macno ahaan anigoo ku tabaruca tabaruca?
Yaan kala hadlayaa hadaan haysto fikrado ama talo soo jeedinno la wadaago?
Maxaan ka helayaa khibradeyda tabaruce?
XIRIIR Abdul Sharif Tabarucaad Guud Kala duwanaanshaha, sinnaanta, barnaamijyada saboolnimada 485-7046 abdul.sharif2@jefferson.kyschools.us
First Task Is to Ask Somali